EU-da oo qaadacay codsigii Netanyahu ee Qudus • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / EU-da oo qaadacay codsigii Netanyahu ee Qudus
EU-da oo qaadacay codsigii Netanyahu ee Qudus
December 12, 2017 - By: HORSEED STAFF
Midowga Yurub ayaa qaadacay codsigii Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ka codsaday dalalka Yurub inay magaalada Qudus u aqoonsadaan caasimada Israel.
Netanyahu ayaa isniintii shalay socdaal ku tagay xarunta Midowga Yurub ee Brussels isagoona noqonaya Raysalwasaarihii ugu horeeyey ee Israel oo muddo 22 sano ah booqda xarunta EU-da.
Hogaamiyaha xukuumada Israel ayaa ka codsaday Midowga Yurub inay raacaan wadadii Maraykanka oo iyaguna u aqoonsadaan caasimada Israel inay tahay Qudus, balse wuxuu halkaasi kala kulmay diidmo qayaxan.
Xoghayaha Arrimaha Dibada EU-da Federica Mogherini oo qaabishay Netanyahu ayaa sheegtay in Midowga Yurub uu aqoonsan yahay Shuruucda caalamiga ah, isla markaana u arkaan magaalada Qudus mid weli aan laga heshiin oo la doonayo inay caasimad u noqoto Falastiin iyo Israel iyadoo la raacayo xaduudii kahor 1967dii.
Israel ayaa si weyn u diidan in magaalada Qudus labo loo qeybiyo iyadoo la raacayo xaduudii 1967dii oo ah mida ay Beesha Caalamka isku raacday, maadaama taasi ay keenayso in Falastiin ay caasimad ka dhigato Bariga Qudus oo ah dhinaca ay ku taal magaaladii Qadiimka ahayd iyo waliba goobaha muhiimka ah sida Masjid Al Aqsa.